Howlgal qorsheysan oo lagu dilay 20-ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab | Somali National Television - sntv.so
Home AMNIGA Howlgal qorsheysan oo lagu dilay 20-ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab
Howlgal qorsheysan oo lagu dilay 20-ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab
Muqdisho (SNTV):-Howlgal qorsheysan oo ay si wadajir ah uga fuliyeen Ciidamada Qaranka iyo kuwa saaxiibadooda meel u dhaw magaalada Baladwayne 25-ka bishaan ayaa lagu dilay 20-ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab.
Meeshan uu howlgalka qorsheysan ka dhacay ayaa sidan oo kale lagu dilay 30 Ka tirsan Alshabaab 30-kii Janaayo ee sanadkaan.
Howlgalkan waa mid Ka mid ah talaabooyinka joogtada ah ee Ciidamada qaranka iyo saaxiivadooda caalamiga ahi ugu diidayaan shabaab in ay nastaan helaanna waqti ay isku abaabulaan si ay u waxyeeleeyaan shacabka soomaaliyeed.
Ciidamada Xoogga dalka iyo kuwa saaxiibadooda ah ayaa waxay howlgallo qorsheysan ka wadaan gobolada dalka,kuwaasi oo lagu Khaarijiyay horjoogayaal iyo maleeshiyaad ka tirsanaa argagixisada Al-Shabaab.
Previous articleMadaxweynaha JFS iyo Wafdigii uu hoggaaminayey oo gaaray magaaladda Doha ee Dalka Qatar
Next articleShirka Madasha Wadajir oo Maalinkii Labaad galay